နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » 3000W professional low lying fog machine
စုစုပေါင်းအလေးချိန် 57.5ကီလိုဂရမ် (flight case 20KG) (including accessories, two barrels of oil)
Your inquiry would be reply with patience within 24 နာရီ.
Q1: မင်းကစက်ရုံလား၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား?
က: KALE သည်ကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးစင်ကာပူ၏အရောင်းဌာနနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည် 18 နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံတင်ပို့.
က: တင်ပို့အတွင်းစီစဉ်ထားပါလိမ့်မည် 2-10 ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ရက်ပေါင်း.
က: ဟုတ်တယ်, KALE တွင်ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံနှင့်အရေးပေါ်အမိန့်များထုတ်ရန်ရှိသည်.
က: သင် T / T ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, Payapl and other kinds of payment will be considered as well, နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
က: ပထမ, အီးမေးလ်သို့မဟုတ် alibaba မှတဆင့်သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကိုပေးပို့ပါ, ထို့နောက်ဈေးနှုန်းအတည်ပြုချက်အပြီးတွင်သင်၏ငွေပေးချေမှုအတွက် proforma ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့ပါမည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတစ်နှစ်အာမခံပါသည်. အကယ်၍ ၎င်းအချိန်သည်ပြိုကွဲလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အစားထိုးယူနစ်ကိုလုံးဝအခမဲ့ပေးသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော်လည်းသင်၏အာမခံချက်ကိုတိုးချဲ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်.
3000ညဥ့်ကလပ်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် W မြူစက် smog ဇာတ်စင်အကျိုးသက်ရောက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ